Ny famindrana ny UNWTO avy any Madrid mankany Riyadh dia manisy tombo-kase ny fizahan-tany any Etazonia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Ny famindrana ny UNWTO avy any Madrid mankany Riyadh dia manisy tombo-kase ny fizahan-tany any Etazonia
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Vaovao Mafana Espaniola • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Hisy rahampitso vaovao ho an'ny fizahan-tany. Rahampitso ity, na ny sasany milaza fa efa nanomboka ny ara-dalàna vaovao. Hita fa mipoitra ho mpandinika sy mpitarika mazava i Arabia Saodita.
Saudi Arabia dia mipoitra ho olobe vaovao amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany maneran-tany izay mitondra ny marika sy ny sehatry ny fitarika fizahantany miaraka.
Ny famindrana ny foiben-toeran'ny UNWTO avy any Madrid mankany Riyadh no hetsika sahy natao hatrizay, ary toa tapa-kevitra i Arabia Saodita.
Saudi Arabia dia mety manana fotoana hitarihana ny fizahantany amin'ny dingana manaraka aorian'ny COVID, Mandritra izany fotoana izany dia manana fotoana ihany koa ny Fanjakana hanitsy ny lesoka sasany amin'ny fizotry ny fifidianana UNWTO.
Ny tontolon'ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia mila fanampiana amin'ny fiverenana amin'ny làlana tsara. Amin'ny rafitra manerantany, ny World Travel and Tourism Council (WTTC) dia misolo tena ireo mpikambana mamokatra sy manan-kery indrindra amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany tsy miankina. Zava-dehibe ny ahafahan'ny WTTC mifampiresaka sy mifandrindra amin'ny sehatra ho an'ny daholobe. Ny sehatra ho an'ny daholobe dia misolo tena ny maso ivoho mikambana PBB Fikambananan'ny fizahantany manerantany (UNWTO).
Hatramin'ny nitondran'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Pololikashvilhis ny seza tao amin'ny UNWTO, dia lasa masoivoho misy tsiambaratelo maro ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany, ao anatin'izany ny fanapahana ny fifandraisana amin'ny WTTC.
Saudi Arabia no mahazo an'io. Ny Fanjakana dia manana ny vola sy ny fitaomana hametraka ara-dalàna vaovao miaraka ary hamolavola ny ho avin'ny fizahan-tany manerantany.
Nanandrana izany i Shina taorian'ny fivorian'ny UNWTO General Assembly tao Chengdu, rehefa voafidy tamin'ny fahefana i Zurab. Sina no namorona ny Alliance fizahan-tany manerantany. Tsy nety niainga mihitsy anefa ity fikambanana ity.
Sahirana ny tontolon'ny fizahan-tany manerantany. Ny orinasa tsirairay, ny firenena rehetra dia miady ho an'ny fahavelomany manokana amin'ny fotoanan'ny areti-mandringana. Na dia mampihena ny ankamaroan'ny fandaniana aza ny Saudi Arabia, dia mandany vola amin'ny fizahan-tany toa ny tsy nisy firenena afaka nanao azy: Dolara an'arivony tapitrisa sy an'arivony tapitrisa.
Ny minisitry ny fizahantany Ahmed Al-Khateeb dia hita nitety an'izao tontolo izao tamin'ny fomba ary niaraka tamina delegasionina mpanolotsaina be foana.
Azo inoana fa nanao tambajotra betsaka kokoa izy, ary malalaka lavitra noho ny sekretera jeneralin'ny UNWTO. Ny delegasiona Saodiana no kintana isaky ny misy hetsika.
Tamin'ny volana aprily tamin'ity taona ity dia afaka nisintona ny fihaonana an-tampony voalohany WTTC taorian'ny COVID-19 ary nampivondrona ny tontolon'ny fizahantany any Cancun, Mexico.
Miaraka amin'ny fanampiana kely avy any Arabia Saodita izay soloin'ny HEAhmed Al Khateeb, ny minisitry ny fizahantany ho an'ny Fanjakana, ny solontena sasany manatrika ny Vovonana Global WTTC nody niaraka tamin'ny fanantenana kely taorian'ny fihaonana tamin'ny minisitry ny Saodiana. Nantsoina hoe kintana mamirapiratra amin'ny fizahan-tany eran-tany izy.
Roa herinandro taorian'ny fihaonana an-tampon'ny WTTC nahomby dia nanambara ny tale jeneralin'ny WTTC sy ny tompon'ilay fihaonambe, minisitry ny fizahan-tany taloha ho an'i Mexico, Gloria Guevara, fa hifindra any Arabia Saodita izy amin'ny volana jolay ho lasa mpanolotsaina ny minisitry ny fizahantany Saodiana.
Raha lazaina amin'ny teny hafa ny minisitry ny Saodiana just dia nanakarama ilay vehivavy nanan-kery indrindra tamin'ny fizahan-tany amin'ny maha mpanolotsaina azy. I Gloria izao dia any Riyadh miasa ho an'ny governemanta Saudi Arabia.
Ny minisitry ny Saodiana tamin'izany fotoana izany dia nilaza hoe: “Manana lova nasionaly matanjaka sy tantara tsy manam-paharoa an'arivony holazaina isika. Gloria dia mitondra fahaizana iraisam-pirenena sy tambajotra iraisam-pirenena goavambe avy amin'ny fotoanany nisolo tena ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany amin'ny maha CEO ny WTTC ary traikefa mivantana amin'ny fivoaran'ny indostrian'ny fizahan-tany vao manomboka tamin'ny fotoan'nny sekretera ny fizahantany any Mexico, izay hanampy antsika -mampiakatra avo lenta ny fampiasam-bola amin'ny fizahantany. "
Marina ny tenin'ny minisitra. Tsy irery i Gloria ao amin'ny tanàna vaovao misy azy. Ivontoerana iray ho an'ny WTTC nosokafana ho fanomezana nataon'ny Ministeran'ny fizahantany Saudi.
Ary koa ny World Tourism Organization (UNWTO) nanangana biraom-paritra ao Riyadh, hanohanana ny fitomboan'ny sehatry ny fizahan-tany any Moyen Orient satria sitrana tamin'ny areti-mifindra coronavirus.
Ny birao dia mandrakotra firenena 13 ao amin'ny faritra ary miasa ho toy ny sehatra hananganana fitomboana maharitra ho an'ny sehatra sy ny fivelaran'ny olombelona amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany ao amin'io faritra io.
Ny birao dia ahitana ivon-toerana statistika natokana izay tanjony ho tonga tompon'andraikitra amin'ny statistikan'ny fizahantany ho an'ny faritra.
Ny dingana farany dia amin'ny fanaovana araka ny azo antoka eTurboNews loharanom-baovao.
Izy io dia mamindra ny World Tourism Organisation avy any Espana mankany Saudi Arabia.
Ny maso ivoho mikambana PBB dia tao Madrid, Espaniôla hatramin'ny nananganana azy tamin'ny 1 Novambra 1975. Izany dia nanome toerana maharitra an'i Espana sy ny fahefana mifidy ao amin'ny Executive Council, ilay foibem-pitondrana an'ny World Tourism Organization.
Ny famindrana ny UNWTO mankany Arabia Saodita dia dingana lehibe ary fanovana lehibe ho an'ny fizahan-tany manerantany. Izy io dia hanome ny fanjakan'ny Arabia Saodita tsy hitarika eo amin'ity indostria ity ihany, fa ny toeran'ny filankevitra mpanatanteraka maharitra.
Ny dingana toy izany dia tsy maintsy ankatoavin'ny Fihaonambe izay kasaina hatao amin'ny volana oktobra amin'ity taona ity any Maraoka. vakio ny UNWTO General Assembly Morocco: Tsiambaratelo mbola tsy nambara?
Araka ny eTurboNews loharanom-baovao, naneho ny fahadisoam-panantenany ny Governemanta Espaniôla ary manohitra mafy izany dingana izany.
Toa ity hetsika ity dia mety efa nomanina tamin'ny volana septambra 2017 tao amin'ny UNWTO General Assembly ao Chengdu, Sina.
UNWTO General Assembly 2017
Mety hanazava ny antony nanohanan'i Arabia Saodita an'i Zurab Pololikashvil tamin'ny fifidianana mampiahiahy azy tany Chine, ary ny fifidianana nataony tamin'ny volana Janoary tamin'ity taona ity ho an'ny UNWTO SG manohitra ny kandidà avy any Bahrain, HE Mai Al Khalifa .
Samy nanohitra ny fomba nanaovana izany fifidianana izany ny sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha, ny Dr. Taleb Rifai sy i Francesco Frangialli. Nanoratra taratasy misokatra tamin'ny antso iray izy ireo mamerina amin'ny laoniny ny decenct amin'ny fizotry ny fifidianana UNWTO . Ity tetik'asa fanentanana ity dia fandraisana andraikitra avy amin'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany, fikambanana tsy miankina iray miaraka amin'ireo mpitarika fizahantany any amin'ny firenena 127, ary nanana ny sonian'ny mpitondra maro.
Ny sekretera jeneraly mpanampy an'ny UNWTO teo aloha ary ny talen'ny CEO WTTC teo aloha Prof. Geoffrey Lipman. Louis d'Amore, mpanorina ary filohan'ny Ivotoerana iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany (IIPT), ary Juergen Steinmetz, filohan'ny vao naorina Tambajotra fizahan-tany manerantany nanao sonia ny anaran'izy ireo ho fanohanana ilay taratasy.
Ny fahombiazan'ny UNWTO amin'ny fizahan-tany eran'izao tontolo izao dia maro ny olona no nametra-panontaniana.
Araka ny eTurboNews loharanom-baovao, firenena efa nitady fanampiana tany Arabia Saodita.
Mihabetsaka ny tranoben'ny mpanohana hanohanana ny UNWTO mankany Saudi Arabia. Ny fanjakana dia mpampiantrano sy naman'ny indostria tsara rehefa mihetsika amin'ny alàlan'ny fanamby tsy azo tanterahina amin'ny sehatra maro.
Na izany aza, ny feon'ny fanoherana dia milaza fa hanome fanaraha-maso be loatra an'i Arabia Saodita ity, ny hafa kosa miresaka ny zon'olombelona sy ny fitoviana ao amin'ny fanjakana.
Ny UNWTO General Assembly dia tokony hanaiky ny tolo-kevitry ny Filan-kevitry ny mpanatanteraka UNWTO amin'ny volana Janoary hanamafisana an'i Zurab Pololikashvilhis mandritra ny vanim-potoana faharoa.
Arabia Saodita dia manokatra varavarana hiaraha-miasa amin'ny tontolon'ny fizahan-tany. Mety manitsy lesoka sasany, ary apetraho ny làlana ho an'ny indostrian'ny fizahantany COVID-19 ho avy.
eTurboNews dia nanantona ny mpanolotsaina manokana an'ny UNWTO SG Anita Mendiratta sy i Marcelo Risi, Talen'ny Serasera, Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany. Tsy nisy valiny.